ပိုမိုဒိုရိုနည်းစနစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ခရမ်းချဉ်သီးပုံရှိသည့် မီးဖိုချောင်သုံး အချိန်တိုင်းစက် (ဤနည်းစနစ်၏ အမည်ကို ၎င်းအချိန်တိုင်းစက်ပုံ၏ အီတလီအခေါ်မှ ယူထားခြင်း ဖြစ်သည်။)
ပိုမိုဒိုရိုနည်းစနစ် (Pomodoro Technique) သည် ဖရန်ချက်စကို ချီရီလို (Francesco Cirillo) မှ ၁၉၈၀-ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင်တီထွင်ခဲ့သော အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု (Time management) နည်းစနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အဆိုပါနည်းစနစ်တွင် အလုပ်ချိန်ကို အစဉ်အလာအားဖြင့် ၂၅-မိနစ်ကြာသော အချိန်ပိုင်းများ (intervals) နှင့် ကြားထဲတွင် အချိန်တို အနားယူမှုကို ပြုလုပ်ရန် အချိန်တိုင်းစက် (timer) တစ်ခုကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ၎င်းအချိန်ပိုင်း (interval) တစ်ခုစီကို ခရမ်းချဉ်သီး၏ အီတလီဘာသာ အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်သော ပိုမိုဒိုရို (Pomodoro) ဟုခေါ်သည်။ ချီရီလို (Cirillo)) တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတွင် ခရမ်းချဉ်သီးပုံရှိသည့် မီးဖိုချောင်သုံး အချိန်တိုင်းစက်ကို အသုံးပြုရာမှစ၍ ဤသို့ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤနည်းစနစ်ကို အက်ပ် (app) များစွာနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များစွာတို့က ဆော့ဖ်ဝဲအချိန်တိုင်းစက်များကို ထောက်ပံ့ပေးကာ လုပ်ကိုင်ပုံနည်းစနစ် ညွှန်ကြားချက်များကို ဖော်ပြခြင်းဖြင့် လူသိများလာစေခဲ့သည်။ ဤနည်းစနစ်သည် ဆော့ဖ်ဝဲဒီဇိုင်းတွင်အသုံးပြုသော "အချိန်ကန့်သတ်လုပ်ကိုခြင်းနည်းစနစ်" (timeboxing) နှင့် "တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ထပ်ခါထပ်ခါ တိုးတက်တည်ဆောက်ခြင်း နည်းစနစ်" (Iterative and incremental development) ကဲ့သို့သောအယူအဆများနှင့် နီးကပ်စွာဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ဤနည်းစနစ်ကို "နှစ်ယောက်တွဲ ပရိုဂရမ်တည်ဆောက်ခြင်း နည်းစနစ်" (Pair programming) တွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားသည်။
မူရင်းနည်းစနစ်တွင် အဆင့် ၆-ဆင့်ရှိသည်။
ပိုမိုဒိုရို အချိန်တိုင်းစက် (pomodoro timer)တွင် အချိန်သတ်မှတ်ပါ။ (အစဉ်အလာအားဖြင့် ၂၅ မိနစ် ထားလေ့ရှိသည်။)
အချိန်ကုန်သွားသောအခါ (အချိန်တိုင်းစက်မှ အသံပေးသည့်အခါ၌) လက်ရှိအလုပ်ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်တွင် အမှတ်တစ်ခု (checkmark) ခြစ်ထားလိုက်ပါ။
သင်၌ အမှတ်လေးခုထက်နည်းလျှင် (၃-မိနစ် မှ ၅-မိနစ်ခန့်အထိ) ခဏတာအနားယူပါ။ ပြီးနောက်အဆင့် ၂ သို့ပြန်သွားပါ။ အမှတ်လေးခု ပြည့်သောအခါ (ပိုမိုဒိုရို ၄-ခု ပြီး မိနစ် ၁၀၀ အလုပ်လုပ်ပြီးသည့် အခါကို ဆိုလိုသည်) အဆင့် ၆ ကိုဆက်ပါ။
ပိုမိုဒိုရို ၄-ခု အပြီးတွင် ၁၅-မိနစ် မှ ၃၀-မိနစ် ခန့်အထိ ပိုကြာကြာ အနားယူပါ။ အမှတ်အရေအတွက်ကို သုညသို့ ပြန်ပြောင်းပါ။ (လက်ရှိအမှတ်များကို ဖျက်ပစ်ခြင်းဖြစ်စေ၊ စာရွက်နောက်အသစ်တစ်ခု သုံးခြင်းဖြစ်စေ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။) ထို့နောက် အဆင့် ၁ ကို ပြန်သွားပါ။
ဤနည်းစနစ်တွင် ပိုမိုဒိုရို ၁-ခုဆိုသည်မှာ အလုပ်ချိန် အပိုင်းတစ်ခု (အစဉ်အလာအားဖြင့် ၂၅ မိနစ်)ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အနားယူမှုများက နားလည်သဘောပေါက်မှုများ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် (assimilation) ကူညီပေးသည်။ (၃-မိနစ် မှ ၅-မိနစ်ခန့်အထိ) ခဏတာအနားယူခြင်းများက ပိုမိုဒိုရို ၁-ခုနှင့် ၁-ခုအကြား ခွဲပေးထားသည်။ ပိုမိုဒိုရို ၄-ခု ကို အစုတခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အစုများအကြားတွင် ၁၅-မိနစ် မှ ၃၀-မိနစ် ခန့်အထိ ပိုမိုကြာမြင့်သော အနားယူခြင်းကို ပြုလုပ်သည်။
ဤနည်းစနစ်၏ ရည်မှန်းချက်မှာ အာရုံစူးစိုက်မှု (focus)နှင့် ဈာန်ဝင်လုပ်ကိုင်မှု (flow)တို့အပေါ် အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်း အနှောက်အယှက် ကြားဖြတ်မှုများ (interruptions)ကို လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုဒိုရို ၁-ခုကို ထပ်ခွဲ၍ မရပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ပိုမိုဒိုရို ၁-ခုအတွင်း ကြားဖြတ်အလုပ်တစ်ခု ပေါ်လာသည့်အခါ၌ ၎င်းအလုပ်ကို မှတ်ထား၍ နောက်မှလုပ်ရန်စီစဉ်ရမည်။ (ကြားဖြတ်အလုပ်လာပေးသူကို လက်ရှိအလုပ်အကြောင်း အသိပေး၊ ညှိနှိုင်း၊ လုပ်နိုင်မည့်အချိန်ကို သတ်မှတ်၊ လက်ရှိအလုပ်ပြီးသည့်အခါမှ အလုပ်သစ်ကို ကိုင်တွယ်ခြင်း ဟူသည့် ဗျူဟာကို သုံးရန်လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။) အကယ်၍ ဤသို့ မဖြစ်နိုင်ပါက လက်ရှိ ပိုမိုဒိုရိုကို စွန့်ပစ်လိုက်ရမည် ဖြစ်ပြီး (ကြားဖြတ်အလုပ်ကို ပိုမိုဒိုရို အသစ် ၁-ခု ပြန်စပြီး ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်ရန်သာ ဖြစ်နိုင်တော့မည်) ဖြစ်သည်။
ပိုမိုဒိုရိုကာလ တစ်ခုမပြီးဆုံးသေးမီ အလုပ်ပြီးစီးသွားသည့်အခါ၌ ကျန်ရှိနေသေးသော အချိန်ပိုကို အောက်ပါအမှုကိစ္စတို့အတွက် အသုံးချနိုင်သည်။
ယခုပြီးစီးသွားသောအလုပ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကာ ပြင်ဆင်မွမ်းမံသင့်သည်ကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊
အလုပ်ကိစ္စများကို သင်ယူခြင်းရှုထောင့်မှကြည့်ခြင်း။ "ငါဘာကို ပိုတတ်လာခဲ့လဲ။ ငါဒီအလုပ်ကို ဘယ်လို ပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားလုပ်ပုံနည်းလမ်းများ ရှိသေးသလား။" စသည့် မေးခွန်းများဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
နောက်ထပ်လာမည့် ပိုမိုဒိုရို အချိန်အပိုင်းအခြားများအတွက် စီစဉ်ထားသော ဆက်လုပ်ရန် အလုပ်များစာရင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ် စဉ်းစားကာ လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း (planning)၊ ပြင်ဆင်ထားသည့် လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိမရှိ ခြေရာခံခြင်း (tracking)၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (recording)၊ ပြုပြင်ခြင်း (processing)နှင့် ကြိုတင်မှန်းဆ ပုံဖော်မြင်ယောင်ကြည့်ခြင်း (visualizing)အဆင့်များသည် ထိုနည်းစနစ်၏အခြေခံဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအဆင့်တွင် လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်ခွဲ (prioritization) ကာ "ယနေ့ပြုလုပ်ရန်" စာရင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ ဤမှတ်တမ်းက သုံးစွဲသူများအား လုပ်ငန်းများအတွက် မည်မျှသော အားထုတ်မှုများလိုအပ်မည်ကို ခန့်မှန်းမိစေသည်။ (အလုပ်တစ်ခုကို မည်မျှ ပိုမိုဒိုရို သုံးမည်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှသာ "ယနေ့ပြုလုပ်ရန်" စာရင်းကို ဖြည့်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။) ပိုမိုဒိုရိုများ ပြီးစီးသွားသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့အား မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြင့်လည်း မိမိကိုယ်တိုင် ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိသည့်အပြင်၊ အဆိုပါမှတ်တမ်းသည် နောက်ပိုင်း ပြုလုပ်ရန်စာရင်းများ (To-do Lists) တည်ဆောက်ရန်လည်းကောင်း၊ မိမိကိုယ်မိမိ ပြန်လည်လေ့လာခြင်းနှင့် တိုးတက်လာစေမှုအတွက်လည်းကောင်း အကြမ်းဖြင်း အချက်အလက် အခြေခံများ (raw data) ဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။
ပိုမိုဒိုရိုနည်းစနစ်တွင် မူကွဲအမျိုးမျိုး ရှိသည်။ လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လုပ်ပုံကိုင်ပုံ ကွဲပြားခြားနားကြသဖြင့် မိမိအလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ကိုက်ညီသော စိတ်ကြိုက်မူကွဲ နည်းစနစ်များကိုသုံးကာ အဆင်ပြေအောင် လိုက်နာရန်ခွင့်ပြုသည်။
ပိုမိုဒိုရို တစ်ခုကို ၂၅-မိနစ်အစား မိနစ် ၉၀ သုံးခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဤ မိနစ် ၉၀ အချိန်အပိုင်းအခြားသည် သဘာဝအတိုင်း အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းရှိသော ကာလ (natural concentration cycle သို့မဟုတ် ultradian rhythm) အယူအဆကို ထင်ဟပ်သောကာလ ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ် သဘာဝအလျောက် ဖြစ်လာသော အချိန်ဇယားအတိုင်း အလုပ်လုပ်ပါ။ လူတစ်ဦး၏ ဘဝတွင် သဘာဝကျသော အချိန်အမှတ်အသားများ ရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အစည်းအဝေးတစ်ခုနှင့် နောက်တစ်ခုကြား အချိန်ကာလ၊ သို့မဟုတ် ကလေးများ သို့မဟုတ် ယောက်ျား သို့မဟုတ် မိန်းမ အိမ်ပြန်ရောက်မလာသေးခင်အထိ ရလိုက်သည့်အချိန်၊ သို့မဟုတ် ပန်းကန်ဆေးစက် အလုပ်လုပ်နေသည်ကို စောင့်နေသည့်အချိန် အစရှိသဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဤအချိန်အပိုင်းအခြားများကို အာရုံစူးစိုက်မှုကာလ သို့မဟုတ် ပိုမိုဒိုရိုအဖြစ် သတ်မှတ်အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။
မိမိကိုယ်မိမိ လေ့လာစောင့်ကြည့်ကာ တစ်နေ့လုံး၌ မည်သည့်အချိန်တွင် အလုပ်အများဆုံးပြီးအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်လေ့ရှိသည်ကို မှတ်သားကာ၊ ၎င်းအချိန်များကို ပိုမိုဒိုရိုကာလအတွက် အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤမူကွဲနည်းစနစ်များ အားလုံးသည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်ကိုလိုက်၍ ပိုမိုဒိုရို အချိန်ကာလအရှည်ကို ချိန်ညှိကြသော်လည်း၊ သတ်မှတ်ထားသော ပိုမိုဒိုရို အချိန်အပိုင်းအခြားများ၌ အလုပ်လုပ်ခြင်းဟူသည့် ပိုမိုဒိုရိုနည်းစနစ်၏ အဓိက နိယာမကို ထိန်းသိမ်းလိုက်နာကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ Cirillo၊ Francesco။ The Pomodoro Technique။ www.pomodorotechnique.com။ 16 September 2012 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2011-05-08 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Pomodoro Technique: Is It Right For You?။ 30 December 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cirillo၊ Francesco။ The Pomodoro Technique (The Pomodoro)။ 11 November 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 December 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Olsen၊ Patricia R. (19 September 2009)။ For Writing Software,aBuddy System။
↑ Cirillo၊ Francesco။ GET STARTED။ The Pomodoro Technique။ 2016-01-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “4. WHEN THE POMODORO RINGS, PUT A CHECKMARK ON A PAPER” Click the "how" link and see step 4. Presumably, the piece of paper can be one's task list or similar. In any case, four check marks indicatealonger break (step 6).
↑ ၆.၀ ၆.၁ Nöteberg၊ Staffan။ Pomodoro Technique Illustrated။ Raleigh, N.C: Pragmatic Bookshelf။ ISBN 978-1-934356-50-0။
↑ Kaufman၊ Josh (2011)။ The Personal MBA: A World-Class Business Education inaSingle Volume။ Penguin UK။ ISBN 978-0-14-197109-4။
↑ The Pomodoro Technique 101
↑ Schwartz၊ Tony။ "The 90-Minute Solution: How Building in Periods of Renewal Can Change Your Work and Your Life (POLL) (VIDEO)"၊ Huff Post၊ 18 May 2010။
↑ Cooper၊ Belle Beth။ "The best productivity system for procrastinators is to work with your natural tendencies"၊ Quartz Media၊ 8 August 2016။
↑ LightsAndCandy။ "The Flowtime Technique"၊ Medium.com၊ 17 August 2016။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပိုမိုဒိုရိုနည်းစနစ်&oldid=741350" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၂၂:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။